Public Health in Myanmar: Dermaroller မျက်နှာကို လှအောင် လုပ်တဲ့ကရိယာ
ကျွန်မ Roll on သုံးတာနဲ့ပက်သက် ပြီးတော့ နဲနဲမေးချင်ပါတယ်။ ကျွန်မ ၇ တန်း အရွယ်ကနေ သုံးလာတာ ခုဆို တတိယနှစ် ရှိပါပြီ။ ခု ချိုင်းမှာ အကျိတ်လုံးလေး တွေ့လို့ တွေ့ပြီး နာပါတယ်။ အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲ။ ဂျိုင်းလိမ်းဆီတွေ သုံးလို့လား။ အန္တရယ်ဖြစ်နိုင်လား။ ကျေးဇူးပြု၍ ဖြေပေးပါအုံးနော်။
18 Sep 11, 23:52
I would like to know about antibiotics. Which antibiotics cream is suitable for face? I plan to use derma roller on my face. After derma roller, I have to use antibiotics cream. Before derma roller. Can I use 70% alcohol to clean my face? Please suggest me antibiotics cream which suitable for face. Please suggest me antibiotic cream which is suitable for face.
Dermaroller ကို Derma Roller, Scientia Derma Roller လဲခေါ်တယ်။ ဆိုတာ မျက်နှာမှာ ကရိယာသုံးတဲ့ ဆေးကုသနည်းတခုပါ။ Collagen (ကိုလာဂျင်) ကိုနိုးဆွပေးပြီး၊ Elastin (အလက်စတင်း) ထွက်စေအာင်လုပ်ဘို့ ရည်ရွယ်တာဖြစ်တယ်။ ယောက်ျား-မိန်မ သုံးလို့ရတယ်။ ၁၉၉၅ ကတည်းက သုံးခဲ့တာပါ။
ထုတ်လုပ်ရောင်းချသူတွေရဲ့ ကြော်ညာမှာတော့ အတော်ဆွဲဆောင်မှုဖြစ်အောင် ဘာတွေအတွက်သုံးနိုင်သလဲဆိုတာတွေ ဖတ်ရပါမယ်။
Scar Removal အမာရွတ်၊ Acne scar removal ဝက်ခြံအမာရွတ်၊ Stretch Mark အရေးအကြောင်း၊ Anti Ageing အိုလို့ဖြစ်လာတဲ့ အစဉ်းကြောင်း၊ Anti Wrinkle အကြောတွန့်တာ၊ Cellulite Treatment (ဆဲလူလိုက်)၊ Hair Restoration အမွှေးပြန်ပေါက်အောင်၊ Hyper Pigmentation Treatment အမှတ်ပျောက်အောင် တွေပါတယ်။ transdermal drug delivery အရေပြားထဲ ဆေးပေး ကုသရာမှာလဲ သုံးပါသတဲ့။
အများဆုံးသုံ ကရိယာမှာ Fine microneedles သေးငယ်လှတဲ့ အပ်ချောင်းလေးတွေ ၁၉၂ ချောင်းကို ၈ တန်း တပ်ထားတယ်။ 0.5-1.5 mm ရှည်ပြီး၊ 0.1 mm အချင်းရှိကြတယ်။
ဒီကရိယာကို Stratum corneum မျက်နှာပြင်မှာ လိမ့်လိုက်တော Microconduits အလွန်မတန် သေးငယ်လှတဲ့ အပေါက်ကလေးတွေ ဖြစ်စေမယ်။ အရေပြားရဲ့ Epidermis (အပီထားမစ်) အလွှာကို မပျက်စီးစေဘူး။ ၁၅-၂ဝ ကြိမ်လုပ်တဲ့အခါ တစ်စင်တီမီတာကွက်တခုမှာ 250 holes/ cm2 အပေါက်လေးတွေ ဖြစ်လာစေတယ်။ Growth factors လို့ခေါ်တဲ့ အသစ်ကြီးထွားခြင်းမှာ အရေးပါတဲ့ Collagen သဘာဝ (ကိုလာဂျင်) ကို ထွက်လာစေမယ်။ Elastin (အလတ်စ်တင်) ဆိုတာလဲ Papillary dermis အလွှာမှာ ဖြစ်လာစေမယ်။ Capillaries (ကပယ်လရီ) သွေးကြောမျှင်လေးတွေပါ အသစ်ဖြစ်လာမယ်။
မလုပ်ခင်မှာ Topical anesthesia ထုံဆေးကို ၄၅ မိနစ်၊ တနာရီလောက် ကြိုတင်လိမ်းပေးရတယ်။ လှိမ့်တဲ့အခါ Horizontal, Vertical, and Oblique directions အရပ်မျက်နှာ အမျိုးမျိုးလုပ်တယ်။ Pin-point bleeding သွေးနဲနဲလေး အပ်ဖျားကထွက်သလို ထွက်မယ်။ ပြီးရင် Saline pads ဆားရည်ဝတ်နဲ့ အုပ်ထားရတယ်။ အားလုံးပေါင်း ၁၅-၂ဝ မိနစ်သာကြာတယ်။ လိုသေးရင် ထပ်လုပ်မယ်။ ၆ ပါတ်လောက် အနည်းဆုံး တားထားရတယ်။ အဲလို စုစုပေါင်း ၃-၄ ကြိမ်လုပ်ရတာလဲ ရှိတယ်။
လုပ်ပြီးတိုင်း Erythema ဆိုတဲ့ နီ-ဖေါင်းနေတာ ၂-၃ ရက်တော့ ဖြစ်နေမယ်။ Local antibiotic creams လိမ်းရတဲ့ ပဋိဇီဝဆေး တပါတ်လောက် လိမ်းခိုင်းတယ်။
ဝက်ခြံအတွက် ကုသတာမှာ Microneedling with dermaroller နည်းနဲ့အတူ Subcision, Chemical peels, Microdermabrasion နဲ့ Fractional resurfacing ဆိုတဲ့ နည်းတွေနဲ့ပါ တွဲနိုင်သေးတယ်။
Antibiotics Used to Treat Acne ဝက်ခြံအတွက် ပဋိဇီဝ စားဆေးတွေကတော့ Tetracycline, Erythromycin, Minocycline, Doxycycline နဲ့ Clindamycin တွေဖြစ်တယ်။
Topical Antibiotics ပဋိဇီဝ လိမ်းဆေးတွေကတော့ Topical Metronidazole (1%), Metronidazole gel (.75%), Erythromycin (Topical), Erymax®, Erygel®, A/T/S®, Staticin®, Erycette®, Ery-Sol®, Erythra-Derm®, T-Stat® နဲ့ Eryderm® တွေ ဖြစ်တယ်။